विकासका लागि पुगेका सडक स्थानियलाई बसाइँसराइ गर्न सजिलो - नेपालबहस
विकासका लागि पुगेका सडक स्थानियलाई बसाइँसराइ गर्न सजिलो
तारानाथ आचार्य : रासस
| १३:५८:०५ मा प्रकाशित
१४ फागुन,बलेवा । बाग्लुङ नगरपालिका–११ रायडाँडाका यातायात व्यवसायी लोकनाथ शर्माले यस वर्षको हिउँद शुरु भएयता छ परिवारको बसाइँसराइका सामान बोकेर चितवन र नवलपुर जिल्लाका विभिन्न ठाउँ चाहारे ।
यहाँका स्थानीय सडकमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनले कुनै न कुनै रुपमा एक÷दुई बसाइँसराइका सामान बोक्ने काम पाए । जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रमा चल्ने मात्रै झण्डै १५० भन्दा धेरै साना सवारीका साधन छन् । मध्यपहाडी जिल्ला बाग्लुङबाट सुविधा र रोजगारीको खोजीमा तराई र शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यातायात व्यवसायीले रिजर्भमा गाडी गुडाएको आँकडा मात्रै हेर्ने हो भने वर्षमा सयौँ परिवार बसाईसराई गर्ने गरेको पुष्टि हुन्छ । बसाइँसराइ चुलिँदा गाउँघर खाली हुँदै गएका छन् । राज्यको पुनःसंरचना भएर स्थानीय तह गठन भएपछि गाउँगाउँमा पुगेका सिंहदरबारले पहाडी जिल्लामा यातायात, स्वास्थ्य, सञ्चार, शिक्षा र विद्युत्लगायतका पूर्वाधार तयार गरी विकासले फड्को मार्दै गए पनि बसाइँसराइ भने झनै बढ्दै गएको छ ।
सबै वडामा पुगेका मोटरबाटो बसाइँसराइका लागि सामान ओसार्नका बनाइएको जस्तो देखिएको छ । सडकसञ्जाल गाउँभरि पुग्दा बस्ती भने रित्तो बन्दै गएका छन् । बाग्लुङ, जैमिनी र गलकोट नगरपालिका तथा बरेङ गाउँपालिका जस्ता केही सुगम स्थानीय तहमा सो समस्या बढी छ । तीन वर्षयता बाग्लुङ–११ रायडाँडाको ओखले, रामतोला, मौरीभीरलगायतका स्थानमा सडकले छोएको छ । सदरमुकाम आउजाउ गर्न सहज पनि भएको छ । तर बसाइँसराइ भने रोकिएको छैन । वडाभित्रै तीन घण्टा लाग्ने बाटो ४० मिनेटमा छोटिएका छन् । गाउँमा विकास पुग्दा बस्तीको बसाइँसराइ आधा बढी भइसकेको छ ।
वर्षौंदेखिको सास्तीले हैरान भएका सहज वातावरण पाएपछि धमाधम चितवन, पूर्वी नवलपरासी र सदरमुकाममा बसाई सरेको रायडाँडाका सामाजिक अगुवा रत्नाखर गौतमले बताए । “विकास नआउञ्जेल मानिस बस्थे, विकास आयो, सबै विस्थापित भए”, उनले भने”, “अब त गाउँको बैठक राख्नुपर्दा सदरमुकाम र चितवनमा बस्नुपर्ने भइसक्यो ।” बसाइँसराइले गाउँका खेतबारी बाँझएको उनले बताए । तीन वर्षमा यहाँझण्डै रु तीन करोड खर्चेर सडक सञ्जाल बनाइएको हो ।
जिल्लाको साविक पैञ्यू थन्थाप, राङखानी, दमेक, विनमारे, गाविस ९हाल जैमिनी नगरपालिका० का अधिकांश घर खाली छन् । जैमिनीका प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले गाउँका मानिसमा शहरीया मानसिकता बढ्दै जाँदा बसाइन्सराइले भयावह रूप लिएको बताउछन् । बसाइँसराइ रोक्नकै लागि स्थानीय सरकारले ल्याएका कार्यक्रममा समेत सर्वसाधारणको चासो कम छ । “हामीले बाँझो जग्गा नरहोस् र रोजगारी सिर्जना होस् भनेर कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम ल्याएका छौँ”, जैमिनीका कृषि प्राविधिक कृष्णप्रसाद ढकालले भने “समूहमा ठूलो मात्रामा खेति गर्ने योजना ल्याएको भए पनि प्रक्रिया पूरा गरेर आउन युवा पुस्ताले झण्झट मान्ने गरेका छन् ।”
जैमिनीमाबाट प्रत्येक दिन दैनिक दुई जना स्थायीरूपमै तराईका जिल्लामा बसाइँसराइ गर्ने गरेको तथ्यङ्क वडा कार्यालयबाट आउने गरेको नगर प्रमुख पौडेल बताउछन् । जैमिनीकामा उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, जैमिनी बरेङ जोड्ने सडक कालोपत्र हुँदैछ । विद्यालय सुधार भएका छन् । स्वास्थ्यको पहुँच सबै वडामा छ । आधारभूत तहका खानेपानी सबैका घरमा पुग्दासमेत बसाइँसराइ झनै तीव्र छ । आर्थिकरुपमा मध्यमस्तरका परिवारको बसाइँसराइ धेरै रहेको पाइन्छ । बसाइँसराइको दर उच्च रहेको भए पनि के कति छोडेर गए भन्ने तथ्याङ्क भने छैन । घर छाडेकाले बसाइँसराइ भने लगेका छैनन् । “छिटफुटले बसाइँसराइ लगे पनि गाउँको जग्गा बेचेका छैनन्”, रायडाँडाका वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले भने, “युवालाई गाउँ फर्काउने योजना बनाउँदैछु ।” दुःख छउञ्जेल बसेका मानिस विकास आउँदा विस्थापित हुनु दुःखद् भएको उनले बताए ।
बसाइँसराइका कारणको खोजी र निरुपणका लागि स्थानीय तहले पहल गरिरहेको भए पनि दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या आइरहेको बताईन्छ । पछिल्लो पटक जिल्लामा बाढी पहिरोका कारणले समेत बिस्थापित भएर बसाई सर्नेको सङ्ख्या ठुलो छ । जिल्लाको जैमिनी–१ कुश्मीशेराको टुनिबोटबाट मात्रै यस वर्ष आठ परिवार पहिरोका कारण बसाई सरेका छन् भने निसीखोला गाउँपालिकाको हुल्दीलगायतका ठाउँमा बगिरहने पहिरोले दर्जनौँ परिवार बसाई सरेका छन् । अहिले स्थानीय तहको सक्रियतामा सडक राम्रा भएका छन् । विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा समेत केही सुनौला किरण देखिएका भए पनि अवसरलाई पछ्याउनेको सङ्ख्या कमै रहेको काठेखोला–७ का अध्यक्ष प्रेम लामिछाने बताउछन् ।
बसाइँसराइ रोक्न गाउँपालिकाको नयाँ योजना १ महिना पहिले
स्वयंसेविकाले जोखिम भत्ता पाएनन् अझै २ मिनेट पहिले
वीरको नयाँ भवन अक्सिजन अभावले सञ्चालनमा कठिनाइ ११ मिनेट पहिले
कोरोना बढेसँगै विदेशी पर्यटक मनाङमा अलपत्र १५ मिनेट पहिले
नयाँ सरकार कोभिडविरुद्ध सक्रिय हाेला त ? २० मिनेट पहिले
पूर्वराजाले दिए शुभचिन्तक तथा आफ्नाे उपचारमा खटिने डाक्टर र नर्सलाई धन्यवाद ४९ मिनेट पहिले
टीकापुरमा अक्सिजन सहयोग अभियान २३ घण्टा पहिले
कोरोना उपचारका लागि अस्पताललाई ३० लाख सहयोग १ दिन पहिले
बिशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट, प्रतिशेयरमूल्य कति ? ५ दिन पहिले
कैलालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द, एटीएमबाट सेवा लिन आग्रह ३ दिन पहिले
भिँडाबारी डाँडागाउँ जोड्ने गरी इदी खोलामाथि निर्माणाधीन पुल ४ हप्ता पहिले
त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका युवकको शव फेला २ हप्ता पहिले
नेपालमा एकैदिन थपिए २५५९ कोरोना संक्रमित ३ हप्ता पहिले
बजेट तर्जुमाकाे लागि चेम्बरकाे २२ बुँदे सुझाव ३ हप्ता पहिले
किन भयाे माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सको सम्बन्ध ब्रेक ? १ हप्ता पहिले
अझैसम्म पनि लाभग्राहीको सूचिमा परेनन पुनः निर्माणमा छुटेका घरपरिवार ७ महिना पहिले
गाँजासहित तीन जना पक्राउ २ वर्ष पहिले
भारतमा एकैदिन झण्डै नौ हजार सङ्क्रमित ११ महिना पहिले
टौखेलमा शव फेला, हत्याको आशङ्का ११ महिना पहिले